Yini oyaziyo ngetiye: izinhlobo nezinhlobo zetiyi
Nsuku zonke siyaphuza itiye. Kodwa singakanani esikwaziyo ngalesi siphuzo? I-tea ingaba luhlaza, omnyama, ophuzi futhi obomvu. Siyaqiniseka ukuthi abantu abambalwa bayazi ukuthi itiye ihlukile uma kuqhathaniswa nokucubungulwa kwamaqabunga etiye.
Itiye elimnyama liqukethe lawo maqabunga ahamba kuzo zonke izinyathelo zokucubungula (ukubola, ukuphikisa, ukuvutshelwa, ukuma nokukhetha). Imifino ihamba ngokumiswa kanye nokuphikisana kuphela. Phakathi kwabo kukhona obomvu nokuphuzi. Ziqukethe amashidi adlule ngokubhaka, ukuvutshelwa okuyingxenye, ukuguqula nokuma. Itiye elibomvu liseduze komnyama, futhi luphuzi - luhlaza. Ngaphezu kwalezi zinhlobo zetiyi, kunezinye. Isibonelo, izithelo, ama-herbal, ama-instant extra and tea.
Ithiye elimhlophe, kuphela amaqabunga amancane kuphela aqoqwe, angakavulwa. Ngezinhlobonhlobo ze-elite, kusetshenziswe i-pepe eyodwa kuphela. Inqubo yokucubungula itiye elimhlophe ihluke kakhulu kunezinye izinhlobo zezinhlobo. Ithiya liyashiya isikhathi esifushane sokuba umusi, bese isomiswa ngokushesha. Ngenxa yalokhu, lapho ucheza, umbala wamaqabunga awushintshi, futhi ukunambitheka kuhlale kugcwele. Ukubamba leli teyi akufanele kube ngamanzi ashisayo (kuze kube ngu-70 degrees), ngaphandle kwalokho iphunga elimnandi lamafutha abalulekile eliqukethe abanye lizolahleka.
Itiye elihlaza liyaziwa ngezinto zalo eziphilayo ezikhulayo eziphilayo ezikhishwa ngesikhathi sokuphuza. Ngakho-ke, ngenkathi yokucubungula, zonke izinyathelo zithathwa ukugcina lezi zinto ezizuzisayo. Ngemuva kokuqoqwa, amaqabunga aphikisiwe kancane emoyeni omusha. Uma sezipholile, zome kancane emoyeni oshisayo. Lokhu kubakhusela ekukhusheni. Ngemuva kokumiswa, inqubo yokuguqula isenziwa.
Itiye elibomvu likhiqizwa kaningi emagqabeni avuthiwe, aqoqwe etizini ezikhulile. Masinyane emva komhlangano, amaqabunga ahlelwa phansi emhlabathini ngokuqondile (ngokubuna). Ngokwesilinganiso, kuthatha amaminithi angu-30 kuya kwangu-60. Khona-ke amaqabunga aphelile ahlanganiswa abe ngamabhasikidi e-bamboo futhi abuyele emthunzini. Lapho bawa ngobumnene baze amaqabunga athole i-hue ebomvu. Uma lokhu kwenzeka, amaqabunga aphumula isikhathi esifushane, bese ephihliza futhi ekugcineni, omiswe okokugcina.
Itiye elimnyama lidlula ukhenketho olude kunazo zonke kwezobuchwepheshe ekusebenzeni kwalo. Iqhutshwa ukuvutshelwa okugcwele, yingakho ithola umbala omnyama owuphawu uma iphulwa. Masinyane emva kokuqoqa amashidi abhalwe ngendwangu encane yokumisa (inqubo yokomisa ihlala emahoreni angu-18). Bese-ke baphenduka ngokucophelela. Ngemuva kokuphazamiseka, amaqabunga afakwa emakamelweni apholile futhi anomswakama, lapho ukuvuthwa kwenzeka khona. Ngenxa ye-oxidation, amaqabunga amnyama. Bese bomile ngaphansi kokushisa okuphezulu.
Futhi, ama-teas ahlukaniswa nemvelo yokwelashwa kwemishini. Ama-green and black teas ahlukaniswe abe acindezelwe, ahlakazekile futhi akhishwe. Okuthandwa kakhulu yi-teas ehlakazekile (i-baihovye). Ama-teas ama-black flavour ahlukaniswe abe yizinqwaba, eziphukile, ezincane nezimbali. Ikhefu eliphukile liqukethe inombolo encane yamahlumela amancane, kanti izinhlobo zeqabunga zakhiwa kuphela ngamaqabunga avuthiwe.
Zenziwe ezintweni eziluhlaza ezingezansi (amaqabunga endala, iziqu kanye noshukela lwamaqanda), okwenzeka ngenxa yokucubungula amaqabunga etiyi emafektheri. Izinsalela ezinkulu zicindezelwa, kanti ezincane zibhekwa. Ama-teas amancane asetshenziselwa izikhwama zetiyi.
Kuyathakazelisa ukuthi itiye lokuqala eliyi-packetized lisetshenziswe ngo-1904. Umthumeli waseNew York, uThomas Salivan, wayefuna ukugcina imali ngokuthumela amasampula wetiye kumakhasimende futhi wanquma ukuwafaka emasileni amancane esilikhi, esikhundleni sezimbiza zensimbi. Njengoba abathengisi bebengakwazi lokhu, banquma ukuthi lezi zikhwama ngetiyi kufanele zitholwe ekomelweni. Babekhathazeke kakhulu ngakho baqala ukuyala itiye ku-Salivan kuphela kule phakheji.
Izikhwama zokuqala zenziwe ngelikasi noma ukotini. Ikhefu lalihlanganiswe ngesandla kuphela. Kamuva, izikhwama zaqala ukhiqiza i-cellophane esele ihlwitha, futhi manje isetshenziswe iphepha elikhethekile elenziwe nge-perforated, elingathinti ukunambitheka nhlobo.
Kuze kube yimanje, yonke inqubo yokupakisha iyashintsha. Njalo ngomzuzu, imishini ekhethekile igcwalisa izinkulungwane zezikhwama zefomu ehlukile (itiye, lesigxathu, eliyi-triangular, nxazonke) itiye. Ipakethe ngayinye iqukethe cishe 2.2 g weti.
Ikhiqizwa ngesimo se-crystalline eyomile noma okukhipha amanzi. Ama-teas anjalo afakwa ngokushesha. Zakhiwa kuphela emaphaketheni e-hermetic. Izinhlobo zezentengiselwano ziyahlukahluka ezinhlobonhlobo zezimboni zetiyi. Zitholakala ngenxa yokuxuba izinhlobo ezahlukene zezimboni. Ngezinye izikhathi igama lisuselwa egameni lomdali walo noma kusukela ngesikhathi sosuku.
Namuhla kunomsebenzi onjengoba titester teas. Ukuxuba kuyinkimbinkimbi eyinkimbinkimbi efuna abantu ababenomsebenzi ongavamile wokusebenza kanzima. Umuntu kufanele abe nomqondo omuhle wephunga nokunambitha. Ngosuku olulandelayo abantu abanjalo kumele bazame amateyimu amaningi, ngakho umsebenzi uphephe.
Inkampani ngayinye yetiyi, njengomthetho, inezinhlelo zayo zokuxuba. Kwabalandeli bezinye izizwe into ebaluleke kakhulu itiye ngumbala weqabunga eliphuziwe kanye nokunambitheka kwetiyi. Ochwepheshe bethu banikezela izinkomba eziyisihlanu ezinhle: ukuqina kwe-infusion, ukubukeka, umbala, iphunga nokunambitheka. Ungaxuba ama-teas akhule emazweni ahlukene, kanye nalawo asekhulile ezweni elilodwa.
Zitholakala kuzo zonke izinhlobo zezinhlobo ze-baihovyh. Ukunambitheka kwe-whisky akuthinti ukubunjwa kwamakhemikhali we-siphuzo. Ngenxa yalokho, ithola ukunambitheka okuveziwe. Ama-aromas angaba amaningana (ezimweni ezingavamile). Ama-teas amaningi avame ukuvota afana nekhwalithi ejwayelekile futhi kuphela ephezulu.
Ngoba namuhla kunezindlela ezimbili zokunambitheka kwamakha. Esokuqala yisandla. Esikhathini esiphelile, engeza imbewu ehlukahlukene yezitshalo, amakhambi, izimpande, izimbali ezimnandi (jasmine, anise, iris, kukurma nabanye). Ngesikhathi leli teyi lingenalo isikhathi sokupholisa ngemuva kokumiswa, lifafazwe ngamacwecwe futhi lucindezelwe kanye nezinhlaka ze-flavourings. Ngemva kwesikhathi esithile, ama-flavour asuswa etiyi, kanti itiye ngokwayo isomisiwe futhi ama-flavour omisiwe afakwe lapho - ama-50 kg weti, cishe ngo-2.5 ​​kg. Le ndlela ibhekwa njengebizayo. Kuyinto engabizi kakhulu ukuphuza itiye ngokusiza kwezakhi zokwenza izinto, okuyi-formula yabo efana nezilinganiso zemvelo. Wonke ama-flavorings aboniswa ngokucacile ephaketheni.
ERussia, abathengi banelungelo elimnandi lokudla okunambitheka. Kodwa ochwepheshe be-Institute of Nutrition baqinisekisa ukuthi izitshalo ziphephile ngokuphelele empilweni. Ngaphezu kwalokho, ngokwezinga lekhwalithi nokunambitheka, ziphakeme kunemikhiqizo yemvelo.
Njengoba ubona, itiye akuyona nje isiphuzo esihlwabusayo. Ngaphambi kokuba kutholakale ezindebe zethu, kuqhutshwa inqubo ende yokuqoqa nokucubungula. Ukuze ujabulele ukunambitheka kwetiye, khetha umkhiqizo wekhwalithi. Zama ukwenqaba itiye emasakeni bese uthenge kuphela u-rasypnoy. Futhi ukuze uthole inzuzo futhi ujabulele iphunga, gcina imithetho yokuphuza. Akuwona wonke ama-teas adingekayo abilisiwe ngamanzi abilayo. Khumbula lokhu. Jabulela iqembu lakho letiyi!
Shintsha: ukuthi konke kwaqala kanjani, ukulungisa kahle nokuphuza kahle
Yenza ukudla okulungile
Imiphi imikhiqizo enensimbi?
Izakhiwo eziwusizo ze-bex
Izimpawu nezakhiwo zeshukela
Izindebe ezinhle ngaphandle kwezijovo nezindebe zomlomo: 3 umzimba olula nsuku zonke
Indlela yokususa izinkamba namagundane
Kungani le nsizwa yathola ngokushesha ngemva kokuhlukanisa?
Izinzwa ezibuhlungu ngesikhathi socansi
Kuyoba yini ihlobo lika-2016: isibikezelo sokuqala se-hydrometeorological centre
Ubungane ngaphandle kokuzibophezela nomuntu ongaziwayo
Isaladi ekhukhamba elisha
Isaladi kusuka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi abilisiwe, ushizi nama-apula
Kungani izitshalo zemifino zizibona zizidla ngokomoya?
Amathangi e-squash akhiwe
Imikhiqizo ye-Top-7 enokuqukethwe okuphezulu kwe-calcium
UVictoria Daineko wadumala kumyeni wakhe osemusha
Indlela yokuthola umsebenzi wesifazane okhulelwe
Indlela yokuhlanza amanzi okuphepha